Content Stream ka PC ama Mobile Device in Chromecast
1. Waa qaabab
2. Calan Chromecast
3. Stream Video ka Devices
5. Waxay ku Apps
6. Players Streaming Media
7. Talooyin iyo tabaha
HDMI dongle geeyo Google, Chromecast, waa hab cusub oo ka hoorto qalab kala duwan. Waxaa la socon kara tiro ka mid ah qalabka socda ee macruufka 9/8/7 ama 6 ka mid yihiin qalabka socda ee Android 2.3 ama qoraalkii ka dib ama PC ama Mac. Marka hore, dadka isticmaala ee Chromecast qulquli yaabaa content ka YouTube ama Netflix, Google Play Movies, qalabka Android iyo macruufka ku dhejiyeen website-ka iyada oo loo marayo browser Chrome ah. Ka dib markii ay sii daayo, waxa uu si degdeg ah taageero uga helay, waayo, HBO GO, Pandora iyo Hulu lagu daray. Update weyn ayaa sidoo kale keenay in tiro ka mid ah barnaamijyadooda la jaan qaada dongle geeyo, sida Viki, Songza, PLex, Avia, BeyondPod iyo RealPlayer.
Stream ka Mac
Stream ka Windows
Stream ka macruufka
Stream ka Android
Qulquli ka March inay Chromecast
Si aad u isticmaasho Mac la Chromecast, waxaad u baahan tahay browser Chrome ah. Waxaad ka heli doontaa website horay loogu talagalay lagana filaayo in loo shubay, sida Google Play Music, Google Play Movies, Netflix iyo YouTube.
Talaabada 1: icon la shubay waa cad yahay ee gacanta ku video bilaa dhakhso ah u ciyaaro TV.
Talaabada 2: Riix icon tuuraan.
Talaabada 3: Dooro qalabka aad jeclaan lahayd video ay u bilaabaan ciyaaro, haddii ay taasi ku Mac ah. Mararka qaarkood laga yaabo in aad leedahay tiro ka mid ah Chromecasts in gurigaaga ku dhex shabakad WiFi gaar ah. Dooro mid ka mid ah in ay ku xidhmaan.
Talaabada 4: Sida Mac iyo Chromecast ku xirmaan, Waad arki doontaa TV shayga in halka gaaban ka ciyaari doono.
Talaabada 5: image ayaa u muuqda mid ku Mac ka dib video bilaabmin ciyaaro ee telefishinka. Si aad u ogaato in Chromecast ayaa ku xiran, icon Kabka uu buluug noqdaan.
Talaabada 6: Sida video ka ciyaara, waxaa suurtagal ah in dhirtuba internetka via Chrome ama biraawsarkaaga doorashada, saaray Mac ama PC in ay seexdaan iyo aqriso emails aad.
Qulquli ka Windows in Chromecast
Iyadoo Video Wondershare Converter , waxaad si fudud u kala sooci karto iyo iskaan si toos ah file warbaahinta kasta oo jiritaanka hore u kaydiyaa PC ah. Taas ayaa ka dhigaysa maamulka uruuriyaa music iyo movie fududahay in meel keli ah. Oo sheegtay in SDK codsiga ugu horeeyay abid ee isku dhafan ee adduunka jidaynayey Chromecast inay ku tuuraan oo sii qulquli waxyaabaha warbaahinta lagu kaydiyaa gal ah TV qeexitaanka sare.
Talaabada 1: Si aad u billowdo geeyo, si loo hubiyo in labada Chromecast iyo kombiyuutarka ku jira mid ka mid network deegaanka. Sidoo kale, Chromecast ku shidan ee waa in loo dhigay si habboon.
Talaabada 2: dejinteeda files diirada video. Markaas tagaan "Stream" tab ee geeska of dhinaca midigta iyo Chromecast waa in qoran. Waxaa Dooro sida qalab geeyo aad. Ka dib markii in, ku dhufatey "Stream" badhanka hoose ee barnaamijka.
Talaabada 3: In uu furmo suuqa pop up ka, guji "Play To TV" button oo dhowr daqiiqo ka dib, waxaad ku raaxeysan kartaa content shaashadda weyn.
Talaabada 4: Marka la xidhiidha geeyo ah ayaa si guul leh ku dhismi la, mugga lagu xakameyn karaa oo ay ku jiraan doorashooyin kale oo loo maqli karo ee shaashadda telefishanka toos ah uga soo guddiga ciyaaryahan warbaahinta.
Stream ka iPhone, iPad in Chromecast
Marka Chromecast Mudanayaasha on PC waa dhameystiran oo ilaa iyo ordaya, hoorto content ka iPhone, iPad ama qalabka kale ee macruufka kasta oo aan la adag waa. Chromecast iyo TV u baahan tahay in la xiran telefoonka ku jeestay oo ku saabsan mid ka mid network Wi-Fi. Sidoo kale, ee Chine aad u baahan tahay si ay u sii qulquli, sida YouTube ama Netflix, waa in lagu dhejiyaa on kiniin ama telefoonka.
Talaabada 1: Tag App Store / Play Store.
Talaabada 2: Raadi iyo dooran app Chromecast ah.
Tallaabada 3: Marka aad la doortay ee app xaq Chromecast, ku xidh ka hor raacaya tilmaamaha.
Talaabada 4: app adeeg geeyo ayaa, sida YouTube, ama wax kasta oo kale oo aad jeclaan lahayd inaad ka muuqdaan TV, waa in markaas la furay.
Talaabada 5: ka dibna adeeg iyo Chromecast waa in lagugu xiro; riix badhanka Broadcast iyo tagto Chromecast.
Talaabada 6: content The in la huleeshay waa in markaas la soo xulay. Tani waxay noqon kartaa hees ama video aad jeclaan lahayd inaad ka muuqdaan TV. Marka aad ku sii adkeeyey play, geeyo waa in si toos ah. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa guddi ay gacanta iyo button Broadcast riixdo ka hor doorashada Chromecast.
Qulquli ka Android inay Chromecast
By hadda, waxaa laga yaabaa inaad hore u ogaan Chromecast kuu ogolaanaya in aad sii qulquli content warbaahinta ka Google Play music, Pandora, YouTube iyo Netflix, oo ay ka mid kale oo warbaahinta online in aad TV. Marka ay timaado in hoorto ka telefoonka ah Android xaq videos guriga telefishanka aan uploading kasta oo internet ah, hab oo kala duwan ayaa loo baahan yahay. Intii lagu guda jiray furitaanka hore ee Chromecast, taasi ma suurto gal ahayd. Si kastaba ha ahaatee, SDK Kabka Google ayaa lagu sii daayay iyo siyaabo kala duwan oo hoorto photos, videos iyo music ka qalabka Android inay TV-ga ayaa sidoo kale ku soo kacay.
Waxaa jira dhowr ah oo Chine in mar hore la sii daayay, jidaynayey geeyo ee maxalli ah si fudud uga soo qalab kasta oo Android xaq u galay TV ah oo xiriir la leh Chromecast. Chine Kuwani ugu fiican yihiin daawashada filimada guriga, DVD luxay, degsado videos oo badan oo content kale.
Fiiro gaar ah: Tan iyo codsiyadaas asal ahaan qulquli content ka kiniin ah ama telefoon, videos ma sii wadi doonaan ciyaaro kiiska qalabka mobile uu dansan yahay.
Marka laga reebo jidaynayey geeyo ee content galay Chromecast ah aad, AllCast taageertaa geeyo ee photos, filimada iyo music in WDTV ah, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, Madaxweyne Siilaanyo 360, Apple TV, Roku iyo xulay Panasonic, Sony iyo Samsung telefishin oo ay ku jiraan qalabka kala duwan ee taageeraya DLNA.
Ka dib markii laga bilaabo AllCast, u tag ururinta warbaahinta iyo dooran file u soo diro in ay TV-ga. On screen badhamada waxaa loo isticmaali karaa inay u boodboodaan, joojin, ciyaaro ama xasil.
App Tani waxay sidoo kale taageertaa music, videos iyo sawiro. Intaa waxaa dheer, waxa ay taageertaa Playlists oo loo isticmaali karaa sida ciyaaryahan warbaahinta ee ay wax uga kaliya bilaabi daawashada filimaanta telefoonka ah Android. Waxaad sidoo kale riixi kartaa batoonka Chromecast ay u bilaabaan hoorto Content gal TV a.
Inta aad isticmaali kartaa app la Chromecast, waxa uu ahaa weli la isticmaalo xitaa ka hor inta Google weligood ku fekerin inuu ka abuuro geeyo iyo Andaros, dongle. App ayaa waxaa la xarun siinta dadka isticmaala si ay u sii qulquli sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow ka telefoonada kala duwan galay TV ah oo xiriir la leh shabakad dhex PS3, Madaxweyne Siilaanyo iyo Koox ka mid ah qalabka kale ee taageeraya DLNA ama UPnP.
App wuxuu bilaabay in uu noqdo qaab hoorto videos maxalliga ah iyo sawiro ka qalab socda ee Android inay Chromecast ah. Si kastaba ha ahaatee, qaababka kale ee dheeraadka ah lagu daray, sida awoodda in ay u diraan videos iyo sawiro ka Google Plus ama Facebook in TV a.
Sidoo kale abuuray sida codsiga content hoorto in ul TV oo kulligiis oo kala duwan, waxaa hadda isboortiga Chromecast aad. EZCast yimaado anfacaya si kuwa doonaya inay wax documents, videos iyo sawiro ka kiniin ah Android ama telefoonka ka hor diraya TV.
Iyada oo 3 PlayStation Console, waxaa suurto gal ah in ay ku xidhmaan adeegyada music iyo video iyo daawato wax walba oo aad xiisaynayso. Codsiyada adeegga Video xor u yihiin inay soo dejisan qaybta Channel My hoos adeegyada Video iyo TV. Degsado Music Unlimited kale oo suuragal ah, iyadoo waqti isku mid ah hoorto content oo laga helay ilo kala duwan, sida Crunchyroll, Epix, YuppTV, VidZone, Gaiam TV, TuneIn Radio, Redbox, NBA, Game Time, Qello, SEN Live Dhacdooyinka, WWE Network, HBO Tag, DailyBurn, Crackle, Vudu, Hulu Plus, MLB TV, NHL, Net Flix, Amazon Video iyo YouTube Instant.
Waxa aad u jeclaan doonaa
Oo dhan 3s Playstation super-caato cusub yihiin bilaa dekedaha la mid ah sida qaybaha caato ah ee qalab, oo ay ku jiraan qayb interfaces video, dekedaha USB hore, Ethernet iyo SPDIF audio indhaha.
Waxa kale oo aad sida kale u kaydinta SSD, awoodda warbaahinta u fiican, cabbir yar yar iyo xaqiiqda ah in uu yahay waxa ugu fiican a cusub ee hoorto warbaahinta doono.
Maxaad ma jeclaan laga yaabaa
Waa arrin aad u niyad tan iyo cable HDMI iman mayso sanduuqa halka bannaanka waa qeyrul, wax yar qaali xataa sida hab drive waa wax yar oo raqiis ah.
Popular Online & Streaming Video Goobaha
> Resource > Video > Content Stream ka PC ama Device Mobile inay Chromecast